China 3D Akangwara Magetsi Neck Massager fekitari uye bhizimisi | Ubetter
Muenzaniso Nhamba: ST-304
Rated simba: 5W
Inzwa Zvinotaurwa voltage: DC5V 1A
Bhatiri chinzvimbo: 1200mAh
Ruvara bhokisi: 170x160x55mm
* Nzira nhanhatu, gumi nemashanu ekuwedzera simba anogona kugadziridzwa pamadiro.
* TENS kupomba, kutevedzera echinyakare Chinese mushonga kukwiza muviri.
* Constant tembiricha akangwara tembiricha kudzora.
* Kutepfenyurwa neizwi, smart remote control
* 6 masaja modhi uye gumi nemashanu masimba: Ubetter Akangwara Pulse Neck Massager yakagadzirirwa 6 mameseji modhi uye gumi nemashanu masimba. Kukupa iwe nemhando dzakasiyana dzekupedzisira yekunakidzwa kwekusimbisa
* Nyatso gadzirisa marwadzo emutsipa: shandisa ganda-rinoshamwaridzika, rinofema rakapfava silicone zvinhu kuti uone kugadzikana kwemutsipa. Kushandisa yakaderera-frequency kupomba kurapa hakugone chete kubatsira kubvisa kurwadziwa kwemutsipa, asi zvakare kukurudzira kutenderera kweropa.
* U-yakaumbwa dhizaini uye Inotakurika ＆ compact dhizaini: uchishandisa ergonomic dhizaini, yayo "U" chimiro uye 360 ​​° kugadzirisa inokupa iwe wakasununguka kutandara.Uhuremu hunongova 340G chete, uye fashoni uye compact dhizaini inokutendera iwe kunakidzwa neruzivo rwekusimbisa chero kupi. .
* 4-poindi inogara ichipisa tembiricha inopisa - Yakashongedzerwa ne107.6 ° F tembiricha yenguva dzose uye inopisa compress basa, uchishandisa yakakwidziridzwa vhezheni yemukati sensor uye tembiricha kuzivikanwa, inogona kunyatso kudzora tembiricha uye kudzivirira kupisa zvakanyanya.
* Yakakura bhatiri bhatiri uye ingwara nguva - Shandisa 1200mAh lithium bhatiri kubhadharisa kwemaawa maviri, inogona kushandiswa kwemaawa matanhatu zvichiramba. Panguva imwecheteyo, ine maminetsi gumi neshanu ekudzima otomatiki kuchengetedza kuchengetedza kwako.
* Mwedzi 24 warandi & 30-zuva rekudzoka mutemo. Usashandise paunogadzira ma pacemaker. Ndapota nyorovesai mutsipa unogona kuita kuti electrode ibate mutsipa kuzere.
* Imwe neimwe kubhokisi remavara, iine IFU
* Saizi yeBhokisi: 17.5x16.5x5.7cm,
* Saizi yeCtn: 36.5x34x36cm
* Qty pamusoro 20 ``: 13320pcs
* Qty pamusoro 40 '': 30384pcs
* Qty pamusoro 40HQ: 35712pcs
Pashure: Akangwara Warm Palace Bhandi
Zvadaro: Otomatiki Enema Bucket
Electric Musoro Massager Remote & Wireless S ...